admin	- ४ असार २०७७, बिहीबार १७:२७
अदालतमा एउटा मुद्दा आयो , जुन मुद्दाले सबैको दिमाग हल्लाइ दियो। अदालतमा सम्पत्ति बिबाद र अन्य घरायसी बिबादित केसहरु आइ नै रहन्छन् । तर यो मुद्दा धेरै नै फरक किसिमको थियो । एक ७० बर्षको बृद्ध ब्यक्ती ले आफ्नो ८० बर्षिय दाइलाई अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।मुद्दामा यस्तो लेखिएको थियो कि , मेरो ८० बर्षको ठूलो दाजु , अब बृद्ध हुनुभयो । त्यसैले उ आफ्नो ख्याल पनि ठिक सँग ले...
घरमा श्रीमती छँदैछे भनेर ढुक्क बस्नेका लागि दुःखद खबर…, १ मिनेट समय निकालेर पढ्नुहोस्
admin	- २ असार २०७७, मंगलवार १३:३०
प्राय:जसो युवा परिवार र आफन्तलाई केही राम्रो गर्न सकिन्छ कि भनेर विदेश गएका हुन्छन । तर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा परिवार सुरक्षित छन् छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुले ख्याल गरेका हुँदैनन् ।कतिपय भर्खरै विहे गरेर वा साना बालबच्चा भएका श्रीमती छाडेर विदेश जान्छन् । जबकि त्यो बेला महिलाले श्रीमानबाट मनोवैज्ञानिक रसामाजिक सुरक्षा चाहन्छन् । त्यो कुरा नभइदिँदा बिस्तारै ती महिलालाई मलाई सुरक्षा गर्ने मानिस नै रहेनछ भन्ने लाग्न थाल्छ ।सँगसँगै...
admin	- ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार २०:४९
कानको काम सुन्ने मात्र होइन । समुद्रशास्त्रका अनुसार कानले मानिसको भाग्य र व्यक्तित्व समेत बताउँछ । त्यसैले तपाईले आफ्नो कान ऐनामा हेरेर आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ । यदि तपाईको कान छोटो छ भने तपाईले दुखी हुनु पर्दैन । किनकी छोटो कान भएका व्यक्ति बुद्धिमान हुन्छन् । त्यस्तै जो व्यक्तिका कान जन्मजात नै लामा हुन्छन् तिनीहरुले लामो जिवन जिउने समुन्द्रशास्त्र बताउँछ । जन्मजात नै लामा कान भएका व्यक्तिले जिवनमा कम...
डाक्टरकी श्रीमतीले ८० जना सँग यौन सम्बन्ध राखेपछि… यथार्थ थाहा पाउँदा सबै चकित
admin	- २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार १४:३४
एक जना डाक्टरकी विधवा महिलाले श्रीमानको मृ त्युपश्चात् ८० जना विवाहित पुरुषहरुसँग ‘लसपस’ रहेको खुलासा गरेकी छिन् । ४३ वर्षकी लुइस भान डेर भेल्डेले हरेक दिन आफ्नो अन्तिम दिनजसरी दर्जनौँ व्यक्तिहरुसँग सम्बन्ध राखेको खुलासा गरेकी हुन् । उनका अनुसार भ्यालेन्टाइन डेपछिको हप्ता प्रायः सम्बन्ध गुमेका मानिसहरुको लागि नयाँ सम्बन्ध खोज्ने समय भएकाले उनी व्यस्त हुन्छन् । उनले आफूलाई यौ न थेरापिष्ट बताउँदै आफ्नो र ती विवाहित पुरुषबीचको चिटिंग सम्बन्ध थाहा...
के दुई मुखे सर्प खाँदा यौ-न शक्ति बढ्छ ? यस्तो छ रोचक कुरा
admin	- २७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १९:०२
एजेन्सी – विश्वमा विभिन्न किसिमका सर्पहरु पाइन्छ । हामिलाई हाम्रो घर खेत परीपरी पाइने बिभिन्न सपहरु बारे मात्र थाँहा छ । यस्तै भारतमा पनि एक अनौठो दुई मुखे सर्प पाइन्छ । भारतको राजस्थानस्थित थार मरभुमीमा दुई मुखे सर्प धेरै नै पाइन्छ । यस सर्पलाई वैज्ञानिकहरुले रेड बोआ सर्प नाम दिएका छन् । तपाईलाई थाहाँ छ ? खाडी देशमा यो सर्प खानाले सबै किसीमका बिरामी निको हुने विश्वास गरिन्छ । सथै...
श्रीमान–श्रीमतीले एकअर्कासँग लुकाउनैपर्ने ५ कुरा
admin	- २७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १०:२४
श्रीमान र श्रीमतीले एकअर्कामा खुलस्त र पारदर्शी हुनुपर्छ । आफ्नो मनका लागेको कुरा निर्धक्क भन्नुपर्छ । यसरी उनीहरूबीचको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धले नै दाम्पत्य जीवनमा प्रेम र भरोसा दिगो राख्छ । सबैलाई यस्तै लाग्ने गर्छ । तर मनका सबैकुरा एकअर्कामा साझेदारी गर्नु कती उचित हुन्छ तरु कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन्, जसमा नित्तान्त गोपनीयता अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्ता कुरा एकअर्कासँग साझेदार गर्दा सम्बन्ध बलियो हुने होइन, बरु अरू खराब हुने भय रहन्छ ।...
यस्तो अनौठो मन्दिर जहाँ १५ वर्षदेखि सर्पले प्राथना गर्दे आएको छ !
admin	- २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार २१:४८
काठमाडौ –हालै सामाजिक संजालमा एक मन्दिरको तस्विर निकै भाइरल भएको छ । उक्त मन्दिरमा बषौ देखि सर्पले बास बस्दै आएको छ । यस भन्दिरमा पुजा गर्ने दिनहुँ भक्त जनको भिड लाग्छ । यो भन्दिर भारतको सालेमाबादमा रहेको छ । शिब मन्दिरले परिचित यो मन्दिरमा बर्षौ देखि सर्पहरु बसिरहेको भारतिय मिडियाले जनाएको छ । पुजा गर्ने आउने मानिसले सर्पलाई नागको स्वरुप भन्दै फलफुल चडाउने गर्दछन् । स्थानियकाने भनाइ अनुसार १५ वर्षदेखि...
admin	- २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:४०
एजेन्सी –कामका लागि विभिन्न ठाउँमा गएका मजदुरहरु कोरोना भाइरसका कारण धमाधम गाउँघर फर्किँदैछन् । तर भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण टाढा टाढाबाट फर्किएका मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बसालेर मात्रै गाउँघरमा छिराउने गरिएको छ । क्वारेन्टाइनको बसाइ पूरा गरेर घर फर्किने मजदुरहरुका लागि सरकारले कस्तो उपहार देला रु भारतको बिहारमा चाहिँ १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका प्रवासी मजदुरहरुको हातमा कण्डम उपहार थमाएर घर पठाइएको छ । बिहारको गोपालगंज जिल्लामा स्वास्थ्य विभागको पहलमा यस्तो अभियान सुरु...